Njikwa Ahụhụ Ere na mgbazinye na Realtyww Info
nlele Njikwa Ahụhụ Bipụtara 5 days ago
Nchịkwa nke pesti dịkarịa ala dịka ọrụ ugbo, ebe ọ dịla mgbe ọ bụla ọ dị mkpa idobe ihe ọkụkụ na-enweghị nsogbu. Iji bulie nri nri, ọ bara uru ichedo ihe ọkụkụ na ụdị akụ, na site na herbivores soro ndị mmadụ na-asọ. O nwere ike bụrụ ihe mbụ emere n'ọrụ, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ibibi ahịhịa site na ịkpọ ha ọkụ ma ọ bụ ịkọ ha n'okpuru, yana igbu ahịhịa dị ukwuu, dị ka ufe na nnụnụ ndị ọzọ na-eri mkpụrụ. Usoro dị iche iche dịka ịgbagharị ahịhịa, ịmị mkpụrụ (nke a makwaara dị ka intercropping ma ọ bụ ịgwakọta agwakọta), na ịhọrọ ahihia ndị na-egbochi pesti. Na UK, na-eso nchegbu banyere ọdịmma ụmụ anụmanụ, njikwa ụmụ mmadụ na ihe mgbochi na-enweta ala site na iji ọgụgụ isi anụmanụ kama imebi ihe. Iji maa atụ, na nkịta ọhịa na-acha ọbara ọbara n'obodo mepere emepe nke ejiri mee ihe megidere anụmanụ, yana mgbe ya na ọgwụ ọgwụ na-adịghị emerụ ahụ. N'ime ime obodo nke Britain, iji ngwa agha eji eme ihe eji egbu egbu bụ ihe a na-ahụkarị. Airguns bụ ihe a ma ama maka njikwa obere ahụhụ dị ka oke, oke bekee na squirrels, n'ihi ike ha dị ala, enwere ike iji ha rụọ ọrụ ndị ọzọ na-egbochi ndị dị ka ogige, ebe iji ngwa agha agaghị adị nchebe.